Intlanzi egudileyo. Iimpawu, indlela yobomi, ukondla nokuzala | Ngeentlanzi
Enye yeentlanzi ezinokufumaneka kwiilwandlekazi zehlabathi yi intlanzi ye mullet. Iindidi zayo zisasazeke kakhulu, ke ngoko, kuxhomekeka kwindawo apho ibonwa khona, inokuba namagama aqhelekileyo ahlukeneyo, ngaphandle kwentlanzi ye mullet. Iyaziwa ngamagama afana no-mujol, muble, mule okanye mugil. Igama layo lenzululwazi ngu UMugil cephalus. Kungenxa yeqela leentlanzi ze-teleost kunye ne-oda le-muljiform.
Kule posi siza kuchaza iimpawu, indlela yobomi kunye nokuzala kwakhona kwentlanzi ye-mullet. Ngaba uyafuna ukwazi ngakumbi ngayo? Sukuphoswa yiyo!
2 Ubungakanani kunye nobunzima
3 Indawo yokuhlala kunye nendawo yokuhambisa
4 Ukutyisa okugudileyo kunye nokuzala kwakhona
Le ntlanzi inamandla aphakamileyo okumelana neetyuwa ezininzi. Oku kubizwa ngokuba yintlanzi ye-euryhaline kunye ne-eurythmus. Into yesibini kukuba inokumelana nobushushu obahlukeneyo. Ngokwesiqhelo, zonke iintlanzi zihlala zinempilo kuluhlu lwamaqondo obushushu ahlukeneyo. Nangona kunjalo, iintlanzi ze-mullet zixhasa iintlobo ezahlukeneyo. Obu buchule buba yinto ethatha isigqibo sokukhula kwayo kwihlabathi liphela kwaye sesona sizathu siphambili sokwanda kwayo kwihlabathi liphela.
Ayilulo uhlobo olufuna iimeko ezininzi ezinzima, ke impumelelo yalo iphezulu kakhulu.. Inokuhlala emanzini ahamba ukusuka kwi-4,5 ukuya kwi-degrees ezikwi-37 degrees. Olu luhlu lwamaqondo obushushu aphezulu luvumela ukuba lube bhetyebhetye xa uhlengahlengisa iimeko ezahlukeneyo. Ityuwa ikwanoluhlu oluphakamileyo. Inokuhlala kwiityuwa ezisusela kwi-0 kuye kwi-45.
Isakhono sokuziqhelanisa nobume obahlukeneyo kunye nobunzulu bunento yokwenza nobungakanani be-specimen. Ubungakanani beentlanzi ezi-Smooth ezingaphantsi okanye ezilingana neesentimitha ezi-7 zihlala zihlala ixesha elide emanzini amatsha. Nangona behlala emanzini amnandi, ayisiyiyo eyona ndawo yokuhlala ilungileyo yokuzala nokukhula kuyo.
Inomzimba odibeneyo kwaye ineempiko ezimbini zangasemva, i-pectoral fin kunye nomsila wokugqibela. Iimpiko zinesayizi encinci kakhulu ukuba siyithelekisa nomzimba uphelele. Inamaxolo ahlukeneyo kwaye umlomo awumkhulu kwaye awubhengezwanga njengezinye iintlobo. Amazinyo ayo mancinci kakhulu kwaye awunawo umsonto.
Ubungakanani kunye nobunzima
Sifumana iisampulu zinobungakanani obuhamba phakathi kweesentimitha ezingama-30 ukuya kuma-60. Kuxhomekeka kuhlobo ngalunye, siya kufumana ubukhulu obungafaniyo. Kufunyenwe iisampulu ezizodwa ezinobungakanani beesentimitha eziyi-120. Zihlala zikhula phakathi kwe-3,9 kunye ne-6,4 cm ngonyaka. Amabhinqa akhula ngokukhawuleza kunamadoda. Zombini ehlotyeni nasentwasahlobo bafumana ukukhula okubonakalayo kuba amaqondo obushushu aphezulu kwaye ukutya kuninzi.
Ngokumalunga nobunzima, eyona nto iqhelekileyo kukuba bakwi Uluhlu oluphakathi kwe-1,5 kg kwesampulu encinci okanye ephuhlisayo kunye ne-8 kg, eyona inkulu kwaye sele ifikelele ekuvuthweni.
Umbala wesiseko ungwevu kwaye uhlala umhlophe. Ukuguqulwa kombala kuvela ngokuhla kwefomathi kwaye indawo yasemva yeyona ndawo imnyama yomzimba uphela. Iyakwazi ukufikelela phakathi kweminyaka emi-4 ukuya kweli-16 ubudala, kuxhomekeka kwizinto ezininzi. Ingagcinwa ekuthinjweni, nangona, njengesiqhelo, ixesha lokuphila lifutshane.
Ukukwazi ukuziqhelanisa nayo nayiphi na imeko kwimeko yasemanzini, uluhlu lwayo lukhulu kakhulu. Iyakwazi ukugcina ukuhlala kumanzi acwengileyo nakwezinto eziphila elwandle. Ithathelwa ingqalelo njengezinto eziphilayo, njengoko kunokuba njalo kwiindawo ezininzi ezahlukeneyo.
Apho kuhlala khona rhoqo Siza kuba nakho ukufumana intlanzi ye-mullet kwiilwandle zamanzi akweleenjiko kunye namanzi ashushu. Indawo apho intlanzi iyakuthatha isigqibo sokuhlala khona iyakuchongwa ngemiba ethile ebalulekileyo kubo. Into yokuqala kukuba unokuba nendawo eyoneleyo yimifula kunye notyani oluninzi. Okwesibini kukuba ifuna unxweme ukuhlala. Zihlala zifumaneka kubunzulu beemitha ezili-120 kwaye le yindlela abanokuhamba ngayo ukuya kumanzi anzulu.
Ngokuphathelele indawo yokuhlala, sithe sasasazeka kwihlabathi liphela nakwiindawo ezikufuphi nonxweme kunye notyani oluninzi. Sigqamisa iisampulu zeentlanzi ezigudileyo ezihlala eSpain. Sibona eCatalonia, eValencia naseMurcia, phakathi kolunye uluntu.
Ukutyisa okugudileyo kunye nokuzala kwakhona
Phakathi kokutya kwezi mugs sinokubona iindlela ezahlukeneyo zokhetho. Yindidi ye-omnivorous, utya yonke into ke. Owona mthombo wokutya yinkunkuma yendalo kunye nezinto ezidadayo emanzini okanye kulwandle. Uhlala eyazi into enokufumaneka kulwandle olugcinwe kwi-substrate. Ubulembu obenzeka elwandle bunokutyiwa.
Ngokubanzi, okona kutya kuninzi ekutyeni kwakho zezi:
Izilwanyana zaselwandle, ezifana ulwelwe obomvu okanye ulwelwe oluhlaza.
I-Nematode kunye nezinye iintlobo zonyaka.
Phakathi kwalolu hlobo kukho i-mullet ehamba kakhulu.
Ngoku siqhubela phambili ekuveliseni kwakhona. Le nkqubo ishwankathelwa ngohambo olukhulu ngenzala entsha. Ukuzala kukude kunesiqhelo, xa kuthelekiswa nezinye iintlobo, ngenxa yokuba kufuneka bafumane indawo efanelekileyo kubo.
Bacinga ukuba eyona ndawo ifanelekileyo yeyona ndawo ikude kakhulu ekuphithizeleni kwaye apho ukhuseleko lwamaqanda lunokuqinisekiswa. Iijuiles zivelisa amaxesha amabini ngonyaka. Eyokuqala yenzeka ekwindla ize enye yenzeke ebusika. Bafikelela ekukhuleni kwabo ngokwesondo xa beneminyaka emi-3 ubudala okanye xa befikelela kubude beesentimitha ezingama-20. Ayizizo zonke iintlanzi ezinokuvuthwa okufanayo. Ezinye zinama-40 cm ubude kwaye azikasebenzi ukuzala kwakhona.
Bazalela amaqanda ayi-0,5 ukuya kwezi-2 amaqanda kumfazi ngamnye, nangona kunjalo uninzi lwazo aluphili. Amaqanda athabatha iintsuku ezimbini kuphela ukuqandusela. Imibungu ihlala kufutshane nebhedi apho amaqanda aqandusele khona kwaye itya kubutyobo kufutshane ne-substrate njengoko ikhula kwaye ikhula.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi ungafunda ngakumbi malunga nentlanzi ye-mullet.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Intlanzi egudileyo
UAlfonso Delucchi Carrión sitsho
Molo Germán, enkosi kakhulu ngolwazi lwakho.
eneenkcukacha kakhulu kwaye inika umdla.
Phendula u-Alfonso Delucchi Carrión
uraymond cargnelli sitsho
Enkosi kakhulu, gqibezela, kubhalwe kakuhle, Siyavuyisana
Ndinevidiyo ethathwe kwizibuko lendlu yam eFlorida, ibhanki enomdla yemillet
Phendula ku-raymond cargnelli
Mholo. Ukuba andiphazami, apha eBrazil siyibiza ngokuba yiTainha. Ngaba uyazi ukuba olu lwazi luchanekile?
Imibuliso enkosi ngolwazi.
Louis gomez sitsho
Wow kodwa olo lwazi lulungileyo ngeenkcukacha ezithile, enkosi kakhulu kunye nemibuliso
Phendula uLuis gomez
Molo, ndibambe izintlu ezimbini ze-chikitas kwaye ndinazo kwitanki enkulu yentlanzi kunye nezinye iintlanzi zalapha kodwa andazi ukuba ndizozityisa ntoni.